व्यक्तिगत घरहरू अधिकांश विकासकर्ताहरूले यस्तो ठोस ग्रेड रूपमा एक शब्द प्रयोग गरेर classifies ठोस। कक्षा - तर, यो भवन सामाग्री अर्को विशेषता छ। के यस्तो चयनात्मकता जडान संग छ, र के चिन्ह र वर्ग बीच फरक छ?
Concretes भन्दा साधारण, अनुपम, भवन सामाग्री, र दोस्रो प्रयोग संसारमा पानी स्रोत पछि छन्। कृत्रिम पत्थर जस्तै सिमेन्ट, पानी, fillers र / वा बिल्डर्स रूपमा घटक केही अनुपात मा मिश्रित एक homogeneous ठूलो को solidification परिणामस्वरूप, प्राप्त छ।
विभिन्न concretes को एक एकदम ठूलो संख्या उद्देश्यमा फरक छ, र उपस्थिति र मुख्य बांधन मिसिन र fillers प्रकार मा - र पकने अवस्था र यसको संरचना। बल, पानी प्रतिरोध र चिसो प्रतिरोध - तर, ठोस को यो सबै किसिम बावजुद, त्यहाँ मात्र तीन आधारभूत गुणस्तरीय भविष्य सुविधाहरु को डिजाइन लागि गणना प्रयोग गरिन्छ कि विशेषताहरु छन्। यी महत्त्वपूर्ण को मात्रा निर्धारण गर्न ठोस को गुण र ब्रान्ड र ग्रेड को अवधारणा शुरू गरेका थिए।
उदाहरणका लागि, व्यापक फरक ठोस नींव को निर्माण को लागि प्रयोग व्यक्तिगत आवास मा चिनो 200 वर्ग बी 15 र एक चिसो पर्छ - F75-F100 र पनरोक - W2-W4।
निस्सन्देह, सबै प्रश्न को पहिलो कुन ठोस को ग्रेड छन् को खडा र वर्ग यसका फरक के छ।
हामी संग, ठोस वर्ग र लोगो, बल विशेषताहरु विशेष हो तर व्यावहारिक आवेदन केही nuance छ सुरु हुनुपर्छ।
ब्रान्ड बल हो मानकीकृत संख्यात्मक सूचकांक प्रयोगशाला परीक्षण र compressive बल देखि व्युत्पन्न। अर्को शब्दमा, जो को मूल्य अधिकतम यांत्रिक लोड वर्ग सेन्टिमिटरले सतह सामना गर्न सक्छन् के निर्धारण गर्छ। ठोस समय बल मा वृद्धि गर्छन रूप मा, परीक्षण सन्दर्भ नमूनाहरू (10 सेन्टिमिटर को एक पक्ष संग डाली घन) छैन कम 28 दिन भन्दा को परिपक्वता को उमेर मा अधीनमा छन्। अवस्थित ठोस चिन्ह - M800 देखि m50 गर्न को दायरामा (को संख्यात्मक सूचकांक मा वृद्धि देखि घनत्व वृद्धि संग)। व्यक्तिगत निर्माण को लागि ग्रेड 400 माथि ठोस प्रयोग गरिएको छैन।
व्यवहार मा यस्तो विनिर्माण प्रविधि, को बेमेल गुणस्तर बालुवा र पानी, र एक सेटिङ परिवर्तन अवस्था बिछाउने मा disturbances रूपमा destabilizing कारक को एक नम्बर असर देखि तथापि, बल दावी छ चिन्ह मूल्य, एक प्रयोगशाला छ। यो सबै शक्ति विशेषताहरु मा एक कमी गर्न जान्छ। र यो त्रुटि वा विभिन्नता को गुणक बीच मुख्य फरक छ ठोस को वर्ग यसको ब्रान्ड मा। मूलतः यो एउटा सानो (5%) विचलन संग बस वास्तविक शक्ति हो। ठोस वर्ग को व्यवहार मा - एउटा महत्त्वपूर्ण गणना मूल्य प्रयोग भविष्य बिरुवाहरु को डिजाइन मा (को मार्क गर्न विपरीत मा) छ। MPA मा मापन र GOST 26633-85 नियमन छ। कुल त्यहाँ 3.5 बाट 60 मा लिएर बल कक्षाहरू को सोह्र छन्।
निम्न गुणस्तरीय विशेषताहरु - पानी प्रतिरोध र चिसो प्रतिरोध - मात्र चिह्न मा वर्गीकृत छन्।
मार्क ठोस, को चिसो पनि प्रयोगशाला मूल्य छ characterizes। यसलाई अधिकतम संख्यात्मक सूचक मात्रा जसमा नमूना स्थिर-हिउं पग्लनु गर्न subjected थियो परीक्षण प्रतिनिधित्व गर्दछ। चिसो आठ अंक 50 फा देखि 500 एफ को दायरामा निर्धारण गरिन्छ
अर्को गुणात्मक विशेषता - पानी प्रतिरोध मा ठोस को ग्रेड। waterproofing को लेबलिंग लागि सन्दर्भ नमूनाहरू पानी (मानक परीक्षण अवस्था विषय) पारित गर्न सक्षम छैनन् जो मा पानी को दबाव को अधिकतम मूल्य हो जो छ ग्रेड लिएर 12 देखि W2 गर्न डब्ल्यू, लागू गरियो।
कसरी आफैलाई द्वारा भित्तामा टाइलहरू राख्न?
छत finishes सबै प्रकारका
कहाँ र कसरी कागजातहरू के आवश्यक छ, 20 वर्ष मा आफ्नो पासपोर्ट परिवर्तन गर्न?
हावर्ड Wolowitz: इतिहास-Lovelace वैज्ञानिक
उत्पादन "Barberi": एक लामो इतिहास संग cloak
Devid Prouz - खेल्छ जो डार्थ Vader